Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle: “Madaxweynuhu hal maalin kuma darsan karo” – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle: “Madaxweynuhu hal maalin kuma darsan karo”
October 11, 2020 October 11, 2020 Hassan Istiila
Khilaafka ka taagan doorashada maamulka Hirshabeelle, ayaa sii xoogaystay kaddib markii guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas, Sheekh Cismaan Barrre Maxamed, uu sheegay in doorashada ay tahay in xilligeeda ay ku dhacdo oo aan wax muddo kordhin ah loo samayn karin hay’adaha hadda jira.
Maalmo uun ka hor ayaa madaxweyne Maxamed Cabdi waare, waxa uu soo saaray warqad uu ku sheegayo in dooorshada Hirshabeelle aysan dhici karin xilligaan, loona baahan yahay in wax badan la xalliyo ka hor inta aan la soo doooran Baarlmaanka kan xiga.
Guddoomiyaha Baarlmaanka Hirshabeelle oo waraysi gaar ah siiyey BBC-da ayaa sheegay in Hirshabeelle la asaasay 9 October 2016 ayna ka dhammaatay sharciyaddii ay haysteen oo ahayd afar sano, ayna laga maarmaan tahay in dawlad cusub la soo dhisaa.
“Mawqifkayga ku aaddann dawlad goboleedka hirshabeelle, waxa weeye in doorasho gasho maadaama wakhtigii uu idlaaday, sida uu dastuurku qabo. Baarlamaankii labaad la soo xulo Guddoon doortaan, madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, ayuu yahay mawqifkayga saxda ah” ayuu yidhi
Guddoomiyaha ayaa sida oo kale sheegay in aanay sharci ahayn wax ku darsiya, sida oo kalena aanu qorayn dastuurkoodu.
“Aniga waxaan guddoomiyihii golaha sharci dejinta, haayadda sharcigana ugu sarreeyo halkanna waxaan ku joogaa sharci dastuurkayagu meelnaba ka qori maayo, muddo korodhsi. habkii doorashooyinkii ayaa socda madaxweynuhuna wuxuu magacaabay guddi soo xulid baarlmaanka labaad, hadda wakhti lama hayo oo habkii ayaa socda. Haddii ku darsi uu madaxweynuhu u baahnaa waxay ahayd in uu sannad ka hor ama lix bilood ka hor laga soo shaqeeyo”
Bilo ka hor ayay ahayd markii uu soo if baxay khilaaf hor leh oo u dhaxeeya madaxweyne Waare iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee dawlad goboleedka Hirshabeelle, markii mooshin laga keenay madaxweynaha uu qabtay Sheekh Cismaan. Isla xilligaas waxaa iyana jiray xildhibaanno kale oo Barlamaanka Hirshabelle ka tirsan oo iyana isla Guddoomiyaha Baaralamaanka Cismaan Barre Maxamed, ka gudbiyey mooshin ay ku doonayaan in ay xilka kaga qaadaan oo uu qabtay Guddoomiya kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Hirshabelle, Cabdi Xuseen Geeddi.
Hore Xafiiska madaxweynaha maamul gobleedka Hirshabelle ayaa meesha ka saaray jadwal ay dhawaan soo saareen guddiga farsamada doorashada ee maamulkaas tan iyo inta laga dhameystirayo qodobBo dhowr ah oo la xidhiidha guddiga.
Warqaddan kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa guddiga lagu farayaa qodobbo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ay wada tashi kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Hirshabelle, beelo badan aysan ku qanacsaneyn qaabka awoodda loo qeybsanayo iyo in guddiga lagu daro xubno haween ah.
“Jadwalka guddiga soo saaray ee uu faafiyay latashi la’aan ma aha mid ka turjumaa xaqiiqda Hirshabelle hadda ku sugan tahay, haddaba jadawalkaas ma aha mid rasmi oo lagu shaqo gelayo waqtiga xaadirka ah, guddiga ma soo saari karo wax go’aanno ah inta la qabyo tirayo oo lagu soo darayo xubnaha ka dhiman” ayaa lagu yiri warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Hirshabelle.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa BBC-da u sheegay in guddiga uu yahay mid farsamo una baahan dhameystir sidaas darteedna meesha looga saaray jadwalkii doorashada ee dhawaan la shaaciyay.
“Madaxweynaha go’aanada ugu dambeeyay isaga ayaa iska leh, guddiga markii la magacaabay ma aheyn guddi doorasho oo madaxbanaan wuxuu ahaa guddi farsamo, shaqadaas waxaa ka mas’uul ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo kor joogteyneyso doorashada ayaa ka mas’uul ah..marka waxay aheyd in guddiga la dhameystiro”
Wuxuu sidoo kale sheegay in markii ay dhaceen khaladaadka ah in guddiga aan lagu soo darin xubno haween ah isla markaana si weyn looga hor yimid.
“Saddex xubnood ayaa u diyaar ah in hadda lagu daro marka guddiga iyagoo aan dhameystirneyn ayay go’aanka gaareen”
Maxamed Cali Caadle wuxuu sheegay in guddiga uusan ku adkeysan karin in uu sii wato shaqadiisa maadama guddiga uu yahay mid farsamo ah oo aanan madaxbanaaneyn.
“Guddiga la magacaabay waaye, waa guddi farsamo ma ahan guddiga mid madaxbanaan, suuragal ma ahan in wax khilaaf ah ay ka yimaadaan wax dhibaata kuma jiraan guddigan madaxweynaha baa magacaabay, warqadda madaxweynaha soo qoray hadduu rabo waa kala diraa awood buu u leeyahay hadduu rabo wasaarad kale ayuu hoos geyn karaa” ayuu yiri wasiirka. BBC Soomaali ayaa warbixintan markii hore lagu daabacay
Maxey tahay gabadha uu isbitaalka ku booqday Guddoomiyaha Golaha Shacbka